ရွှေဘိုသား: သာမန်လူလို တွေးခေါ်ခြင်း (၂)
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Friday, October 26, 2007 /
Both articles are extremely nice!!
I don't want to be as such illiterate horse-keeper who praised YAW-Minn-gyii.To the best of my capacity--very nice I can just say!!
တို့နိုင်ငံကြီးမှာ တကယ်လိုနေတာက မိမိကိုယ် ကိုယ်ထက် နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့သူတွေပါ။ ရွှေဘိုသားပြောသလို အရည်အချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ သူတို့က ခေါင်းဆောင်ပဲ လုပ်ချင်ကြတာကလား....
ပြည်သူနဲ့တသားတည်း ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူရှေ့က တပ်ဦးက ရင်ဆိုင်မဲ့လူတွေကသာ သမိုင်းကိုပြောင်းပေးနိုင်မှာပါ...
တပ်ပေါင်းစုတွေကလည်း မရှိမဟုတ်ပါဘူး ရှိနေပါတယ် လက်တွေ့မှာ လူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ကြလို့ ကိုင်စွဲနေတဲ့ တပ်ပေါင်းစုအကြီးကြီးဆီမှာတောင် ဖော်ဆောင်လို့ ဖြစ်လာရင် ဘာလုပ်မယ် စီမံကိန်းရှိခဲ့ပုံ မပေါ်တာများလားလို့ အမစဉ်းစားမိသေးတယ်။ ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှဆိုတာကို သိနေယုံနဲ့ မရပဲ တကယ်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ က တကယ့်ကို အနစ်နာခံပေးနိုင်ရမယ် ထင်ပါတယ် ။ အဲဒီအခါ ကိုယ့်အဖွဲ့မှာ ကိုယ်ဥက္ကဌပေမဲ့ ပေါင်းစုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က သာမန်ဖြစ်ချင်လဲ အဖြစ်ခံနိုင်ရမယ် ထင်တယ်။
နောက်တချက်က တို့နိုင်ငံကို ကူညီသယောင်နဲ့ ချောက်ထဲကို ရောက်အောင် လမ်းလွှဲပေးနေတဲ့ NGO တွေလဲ ရှိနေတယ်လေ။ သူတို့က အဓိကရန်သူကို ပျောက်ပြီး ကိုယ့်အင်အားချင်းသွေးကွဲစေမယ့် စည်းလုံးမှုပျက်ပြားစေမယ့် ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ငွေကိုပုံပေး ဖျက်စီးနေသေးတယ်။
အဲဒီအခါ အတွေးအခေါ်မပြတ်သား မခိုင်မာပဲ ၊ အနစ်နာမခံချင်သူတချို့က အဲဒီလမ်းတွေကို ပျော်ပျော်ကြီးလျှောက်ယုံမကပဲ ရန်သူကိုတောင် ပြန်အထင်ကြီး ။ ကိုယ့်ဖက်ကလူတွေကို နားမလည်သူတွေအဖြစ် ပြန်မြင်နဲ့ တောအုပ်ကြီးကိုမမြင်နိုင် ဖြစ်ကြပြန်ရော...
တကယ့်စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်အပြတ်ရှင်းပြီးမှ ရလာနိုင်မဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေ
အောက်မှာ ကိုယ်တို့ရဲ့ အင်အားတွေ ရန်သူကိုမေ့သွားကြတယ်။
အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ အဲဒါတွေဘယ်တော့မှ စစ်မှန်စွာမရရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကို မေ့သွားအောင်လဲ ငွေတွေက လုပ်ပေးလိုက်တာကိုး....
အဲဒီအခါမှာ တော်လှန်ရေးထဲမှာ ခေါင်းဆောင်တော့ ခေါင်းဆောင်ပဲ ။ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း တော်မှတော်ပဲ....။
ဒါပေမဲ့ နအဖပြုတ်ကျမှ ဖြစ်မယ် ဆိုတာထက် အရေးကြီးတာတွေ ရှိသယောင် ထင်သွားတဲ့အခါမှာ.....
မမေ့ဘို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ သတိပေးနေရတယ်လေ။
ရွှေဘိုသားပို့စ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ တကယ့်ကို ထောင့်စုံအောင်လဲ တွေးနိုင်ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးပါရစေ။။
u r right, but we continue what we can do,and also encourage to u, pls write more & more again & again, our aim will be coming soon
Your two articles is so nice!
It make us to think!
But as you know Daw Su is under house arrest.So if possible we need another hero who lead all Myanmar people.
Please wrtie similar article which are very helpful cause it is based on history and present situation.